Mmalite nke mgbụsị akwụkwọ-News Center-Ningbo SUNSOUL UTgbọ ala ngwa mma CO., LTD
Mbido nke Mgbụsị akwụkwọ
Oge: 2020-08-27 Hits: 17
Oge mgbụsị akwụkwọ bịakwutere anyị nwayọ, ya na ikuku ụbịa, ụbịa mmiri na ụbịa ụbịa.
Ifufe mgbụsị akwụkwọ dị jụụ, na-efegharị na ihu, dị ezigbo mma. Enweghị okpomọkụ n'oge okpomọkụ, ọ bụghị oyi oyi. Oge mgbụsị akwụkwọ mara mma ma na-ekpo ọkụ.
Eluigwe na-acha anụnụ anụnụ, igwe dị elu, na-eme ka ndị mmadụ nwee obi ụtọ ma na-enye ume ọhụrụ, ọnọdụ ahụ na-efegharịkwa na igwe ojii, na-ele anụnụ anụnụ nke igwe, na-eche nwayọ.
Fọdụ ndị mmadụ na-ekwu na mgbụsị akwụkwọ bụ oge nwute. Osisi na-amalite ito na oge opupu ihe ubi, na-eto eto n'oge ọkọchị, na-akpọnwụ ma ọ bụ na-apụ n'anya n'oge mgbụsị akwụkwọ. Oge na-aga, oge ntorobịa dị ka mmiri pọmpụ, na-echegbu onwe ya maka oge mgbụsị akwụkwọ, na-ekpughe mmetụ dị jụụ. Mgbụsị akwụkwọ na-ewetara anyị udo na sublimation, na-ewetara anyị amamihe na echiche.
Anyị nọ n'ọgbọ ọsọ ọsọ, ọ dịkwa mfe ịhapụ onwe anyị n'ụwa. Otú ọ dị, nke a bụ ihe a na-akpọ ndụ. Ndụ enweghị ike ịbụ ihe niile ị chọrọ ka ọ bụrụ, na nsogbu a ka na-aga n’ihu. Ọ bụ ezie na ntụgharị dị na ndụ bụ ihe a na-apụghị izere ezere, ọ bụrụhaala na anyị dị jụụ ma tụlee nsogbu ahụ site n'akụkụ ọzọ, ihe niile ga-adị iche.
"Yuanjue Sutra" kwuru n'otu oge, sị: “Anyaukwu niile nke mmadụ niile na-alọ ụwa.” Anyi aghaghi ima otu anyi ga esi hapu ma mara ihe obi uto bu. Ndụ mmadụ bụ n'ezie njem dị ogologo oge. Agbanyeghi otutu onu na apịtị di n'uzo, enwere okooko osisi opupu ihe ubi na oge udu. Naanị site n'ịmụta itinye echiche niile, nsogbu ga-apụ n'anya.
Ndụ, ọ bụghị mmadụ niile ga-enwe afọ ojuju; ọrụ, ọ bụghị mgbe niile na-egbukepụ egbukepụ na enweghị nchekasị; na-aga n'ihu, na-ezute ihe mgbochi mgbe niile; ịhụnanya, a ga-enwe mgbe niile. Mụta ịtụgharị mgbe ụzọ anaghị arụ ọrụ, amanyela ndị ọzọ, atụla ụta onwe gị. Mgbe enwere eriri n'ime obi, mụta ịhapụ echiche gị ma họrọ ịhapụ. Memoriesfọdụ ncheta na-echeta dị ka ịhụnanya. Painfọdụ ihe mgbu, hapụ ka ọ bụ obi ụtọ.
Na-ahụ n'anya ugbu a, ntakịrị tozuru etozu, obere nsogbu, enweghị mmasị karị, obere aha na ọgaranya, Eziokwu karịa, enweghị ego. Hapu obi di na elu, dika odida a mara nma, elu igwe nke udu ngburu.
Enwere ọtụtụ nsogbu na ndụ, ịhapụ ka ọ bụ obi ụtọ.
Previous: Romantic Tanabata, ịhụnanya na nkwanye ugwu
Ọzọ: Nkewa bụ maka njikọta ka mma